Manampahefana Okrainiana Voaroaka Noho Ny Fampiasana Tolotra Mailaka Rosiana Tamin’ny Fifandraisana Ofisialy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Oktobra 2015 15:23 GMT
Mihevitra ny manampahefana Okrainiana fa mety “hampididoza ny fiarovam-baovaon'ny firenena” ny fampiasana ny tolotra mailaka Rosiana.” Sary namboarin'i Tetyana Lokot.
Voalaza fa voaroaka ny manampahefanan'ny governemanta iray ao amin'ny faritra Lviv ao andrefan'i Okraina noho ny fampiasana tolotra mailaka Rosiana mba hanaovana fifandraisana ofisialy mifandray amin'ny asany ao amin’ ny governemanta.
Mitatitra ny Ukraine Today fa nampiasa ny tolotra mailaka elektronika Mail.Ru ao Rosia amin'ny fifandraisana amin'ny asany i Oleksandr Krevskiy, mpiasa ao amin'ny sampan-draharahan'ny fiarahamiasa sy ny fizahantany iraisampirenena ao Lviv.
Nilaza tamin'ny Ukraine Today i Halyna Hrechyn, mpitondratenin'ny lehiben'ny fitantanam-paritra ao Lviv:
Nahazo baiko avy amin'ny Praiminisitra izahay mba hametra ny fampiasana ny (lohamilin'ny mailaka Rosiana) satria asa ofisialy izany ary indrindra nanomboka tamin'ity mpiasa niasa tao amin'ny Departemantan'ny Fiarahamiasa Iraisampirenena ity. Tsy vao herintaona izy no niasa tao, fantany ny fameperana rehetra.
Nilaza ny governoran'ny faritra Lviv, Oleh Synyutka fa mino izy fa mety ‘hanimba ny fiarovam-baovaon'ny firenena” ny fampiasana ny tolotra mailaka Rosiana, manaparitaka ny fifandraisana ofisialin'ny fanjakana amin'ny fanamafisana ny vaovaom-panjakana sy ny fepetram-piarovana momba ny fifandraisana.
Tamin'ny volana Mey 2015, nisarika ny saina ilay mpikatroka sady mpanao gazety Okraniana manoloana ny zava-misy fa 20% maherin'ny mpiasan'ny governemanta Okrainiana sy ny andrim-panjakana no mbola mampiasa kaonty mailaka maimaimpoana omen'ny orinasa Rosiana ary ampiantranoina ao amin'ny lohamilina Rosiana.
Mitatitra ny media Okrainiana fa manadihady izay mety ho “vaovao tafaporitska” ny sampan-draharaham-piarovana ao amin'ny firenena ankehitriny taorian'ny fampiasan'i Krevskiy ny lohamilina mailaka Rosiana, manoloana ny adim-baovao ankehitriny eo amin'i Okraina sy Rosia.
Araka ny efa notaterin'ny RuNet Echo teo aloha, nanao izay hanamorana amin'ny fidirana ao amin'ny rakitahiry hoentin'ny mpamatsy tolotra aterineto Rosiana sy ny orinasan'ny aterineto rosiana miasa amin'ny votoatin'ny mpiserasera ny Sampan-draharaham-piarovana Federaly Rosiana. Tamin'ny 8 Aprily 2015, nomena fahefana mitovy amin'izany ihany koa ny mpanara-maso ny aterineto ao Rosia, Roscomnadzor, manome fahefana ho an'ireo mpiasany mba hanara-maso ny hafatra manokan'ireo mpiserasera amin'ny mailaka sy ny media sosialy Rosiana. Anisan'izany ny tolotra mailaka ao amin'ny sehatra .ru, ny Odnoklassniki, ny Vkontakte (samy habaka tambajotra sosialy malaza ao Rosia izy ireo roa ireo), fandefasan-kafatra toy ny ICQ sy Agent.Mail.Ru, ary ireo sehatra bilaogy Rosiana marobe.
Na dia afaka manara-maso ireo hafatra voaray, nalefa sy voavaky aza ny Roskomnadzor, ary miditra amin'ny votoaty manokana ataon'ny mpiserasera amin'ny aterineto, nanamafy ny mpiambina ny Aterineto fa manome fahafahana azy ireo hiditra amin'ny tahiry voamarika (metadata) ihany ny lalàna “manohitra ny fampihorohoroana” ao Rosia, saingy tsy mamela azy ireo hamaky ny votoatin'ny mailaka sy ny hafatra amin'ny aterineto tsy misy didy ofisialy fampiharana ny lalàna.